के तपाई मलाई खोज इन्जिन दर्ताको आवश्यकता बुझाउन सक्नुहुन्छ?
त्यहाँ तीनवटा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको खोज इन्जिनहरू छन् जहाँ तपाइँ आफ्नो साइट - Google, Bing, र Yahoo प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ. यदि तपाईंको वेबसाइट यी सबै इन्जिनहरूको पहिलो SERP पृष्ठमा आउँछ भने, यो तपाईंको लागि एक राम्रो चिन्ह हो जुन तपाईंको साइट राम्रो-अनुकूलित र पेश गरिएको छ भनेर देखाउँछ।. यद्यपि, यदि यो नजिकको छैन भने, यसको मतलब यो हो कि तपाइँको सम्भावित क्लाइन्टहरूले तपाईंको वेब स्रोत पत्ता लगाउन सक्दैनन् र तपाईं आफ्नो राजस्व बढाउन र ब्रान्ड पहिचान सुधार गर्न मौकाहरू गुमाउनु हुन्छ।. यस परिस्थितिलाई सुधार गर्न, तपाइँलाई एक वेबसाइट पुन: डिजाइन गर्न आवश्यक छ, विजेता प्रोमोशनल अभियान सञ्चालन गर्न र इन्टरनेट खोजी गर्न आफ्नो वेब स्रोत पुन: पेश गर्नुपर्दछ।.
मैले आफ्नो साइट इन्जिन खोज्न किन पेश गर्नु पर्छ?
यस परिदृश्यलाई कल्पना गर्नुहोस् जुन तपाईंले पहिले नै आफ्नो साइटलाई अप्टिमाइजेसन गर्नुभयो र पनि एक साइट पुन: डिजाइन गर्नुभयो, तर तपाईको दर्जा अझै पनि कम छ।. यसको कारण के हुन सक्छ? म तिमीलाई एक गुप्त कुरा गर्न जाँदैछु किन तपाईंसँग यस्ता खराब परिणामहरू छन्. खोजी इन्जिन केवल तपाईंको एसईओ प्रयासको मूल्यांकन गर्न सक्दैन किनकि तपाई आफ्नो साइटमा आफ्नो साइट पेश गर्नुहुन्न. इन्जिन खोज्नको लागि तपाईंको साइट पेश गरेर, तपाईले सूचीमा सूचीबद्ध र गुणवत्ता खोजी ट्राफिकलाई आकर्षित गर्न सक्नुहुनेछ. यसबाहेक, तपाईंले खोज इञ्जिनहरू सबै वेबसाइटहरू अपडेटहरू देखाउन मौका पाउने मौका पाउँनुहुन्छ र चाँडै तपाईंले तिनीहरूलाई लागू गर्नुहुनेछ. वेबसाइट मालिकहरूले आफ्नो वेब स्रोतहरूलाई इन्जिन खोज्नबाट फाइदा लिनको लागि उनीहरूले आफ्नो रैंकिंग सुधार गर्न र रूपान्तरित दर बढाउन सक्दछन्.
इन्जिन खोज्ने दर्ता कसरी गर्ने?
तपाईंको साइट Google मा प्रस्तुत गर्न सजिलो छ. तपाईंले कुनै शुल्क तिर्न वा लामो दर्ता फारम भर्नु आवश्यक छ. Google मा तपाईंको साइट पेश गर्न को लागि, तपाईंलाई Google Search Console को साथ आफ्नो साइट स्थापित गर्न आवश्यक छ. त्यस पछि, तपाईंलाई पेश गर्नु पर्ने URL को लागी Google को वेब पृष्ठमा जानुहोस्. यो काम पूरा गर्नको लागि, तपाइँले खोज बक्समा आफ्नो वेबसाइट URL सम्मिलित गर्न आवश्यक छ, पुष्टि गर्नुहोस् कि तपाई "एक रोबोट होइन" चेक गरेर व्यक्ति हुनुहुन्छ र "युआरएल थप्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्।. "यसबाहेक, यो तपाईंको वेबसाईटको नक्सा Google Search Console मार्फत पेश गर्न योग्य छ.
तपाईले तपाइँको साइटलाई Bing मा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ Google लाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ. यस प्रणालीको साथ आफ्नो साइट दर्ता गर्न, तपाइँ Bing को वेबमास्टर उपकरणमा जानुहोस् र त्यहाँ प्रयोगकर्ताको रूपमा दर्ता गर्नुहोस्. तपाईंले लगइन प्राप्त गर्नुहुँदा, तपाईंले आफ्नो गृहपृष्ठ URL सम्मिलित गर्न आवश्यक छ र "पेश गर्नुहोस्" बटन क्लिक गर्नुपर्दछ. प्रक्रिया पेश गर्नु भएपछि, तपाईंलाई डोमेनको स्वामित्व प्रमाणित गर्न आवश्यक छ. प्रमाणिकरण प्रक्रिया पूरा गर्नको लागि, तपाईंले आफ्नो साइटको हेडरमा एचटीएमएल कोडको भाग थप्न आवश्यक छ.
हालैदेखि, माइक्रोसफ्टले बिंग र याहू खोजी इञ्जिन दुवैको स्वामित्व लिन्छ।. यसको अर्थ यो हो कि जब तपाइँ आफ्नो साइट बिंगमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, तपाई पनि याहू खोजी परिणामहरूमा पनि देखा पर्नुहुनेछ. विगतमा, याहू सबमिशन प्रक्रिया भुक्तानी गरिएको थियो. यद्यपि, आजकल यो निर्देशिका अब उपलब्ध छैन Source .